Mpempe Embraer 120ER Brasilia PAD FSX - Rikoooo
downloads 13 235
Full ngwugwu n'ihi na FSX (ihe nlereanya, kokpiiti a na-ahụ anya na ụda) na-abịa na ederede anọ: Air France (Mpaghara), United Express, USAir Express (akụkọ ihe mere eme), Canarias Provincial. Ọ dị mkpa iji na-agụ akwụkwọ ntuziaka gụnyere na nke a mkpọ.
The Embraer 120 Brasília bụ a ejima turboprop ugbo elu na 30 oche arụpụtara site Embraer na Sao Jose dos Campos na State of São Paulo.
Ọ na kwadoro site na abụọ turbines PW118B Pratt & Whitney, onye ọ bụla na-anapụta 1,800 HP na na aro. Ya cruising-agba bụ gburugburu 300 mara akpụ (555 mph) na nwere a nso nke 800 nm (1,481 km) na zuru ibu. Ya arụmọrụ n'uko bụ 32,000 ụkwụ (9,754 m), ọ bụ ezie na ọ bụghị nkewa RVSM, ọ bụ nanị 29,000 ụkwụ na Europe.
N'ime 350 mbipụta nke a ugbo elu e wuru. Ọtụtụ European ụgbọ elu na-eji dị ka onye ozi ugbo elu n'ime Europe (Air Littoral, DAT, DLT, Excel, Regional, Atlantic Air Assistance). Ọ ga-anọchi na EMB 135.